Geelkii – 100 km u soo jaray – si uu ula midoobo Geeljirihiisa! | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Geelkii – 100 km u soo jaray – si uu ula midoobo Geeljirihiisa!
Geelkii – 100 km u soo jaray – si uu ula midoobo Geeljirihiisa!
Posted by: Mahad Mohamed 14 days ago
Himilo – Geel guri-jante ah oo afka qalaadna lagu yiraahdo ‘homesick’ ayaa degay qalbiyada malaayiin Shiinees ah kaddib markii la ogaaday inuu fogaan dhan 100 km usoo jaray si uu dib ugu soo noqdo guriga mulkiilihii lahaa – sideed bilood kaddib markii la iska iibiyay.
Wuxuu soo xulay saxaraha dhulka Mangolia ee dalka Shiinaha isaga oo maalmo badan kusoo jiray safar uu ugu danbeyntii kusoo gaaray halkii uu doonayay.
Geelkani oo ay oogadiisa ka muuqatay nabarro kala duwan ayaa bidhaantiisa la arkay isaga oo cagafeynaya dhulka saxaraha ah ee Shiinaha. Geeljire kamid ah dadka degaanka ayaa siiyay magan-gelin iyo cunno. Wuxuuna ku dadaalay inuu ogaado halka uu kasoo naqraacay. Warkiisa siima daahin ilaa uu ka gaaray ninkii lahaa oo ay kasoo lumay. Balse hadda waxaa – kaddib ogaanshaha sheekada geelkani – ninkii hore u lahaa uu doonayaa inuusan dib ugu celin gacantii uu kasoo baxsaday.
Temur oo ah geeljirihii awal iska lahaa mulkiyaddiisa iyo afadiisa waxay bishii October sannadkii hore geelooda ka iibiyeen nin kale oo kaddibna la aaday masaafo u jirta 100 km halka ay ku nool yihiin.
Gacdii hore, geela ayaa u muuqday inuu la qabsaday dabeecadda cusub ee degaanka la geeyey, balse bishan July dhexdeeda wuxuu usoo cararay jihada gurigii uu kusoo qaangaaray.
Marka loo eego muqaallo kala duwan oo laga sameeyey qisadiisa, geelkani wuxuu soo jaray 100 km isaga oo soo maraya buuro iyo dooxooyin kahor inta uusan kusoo dhicin lama-degaanka u dhow halkii uu kusoo barbaaray.
“Markii aynu maqalnay warkiisa, waxaan doonnay inaan la hadalno mulkiilihii naga iibsaday awal, waxaan dooneynaa inaan siino neef kale si aan ugu bedelno,” ayuu yiri Temur.
“Kama iibsan doono qolo kale mar danbe. Waayo waxaan ogaanay inuu si dhab ah nooga mid yahay,” ayay tiri afadiisa.
Sheekada socdaalka geelkani waxaa daawaday in ka badan 16 milyan kuwaas oo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay.
“Aad bay iiga ilmeysiisay sheekadiisa, xooluhu waa baariyaal,” ayuu yiri qof ka dhiibtay aragtidiisa.
Mid kale ayaa intaas ku darsaday: “Ma suurayn karno silicii uu usoo maray si uu ugu danbeyntii ula midoobo reerkiisa, waxaa ku dhacay guri-janti xad-dhaaf ah.”
Previous: Man City oo wali wadahadallo ku saabsan Torres kula jirta Valencia
Next: Man United oo yareynaysa xiisaha Grealish si ay diiradda u saarto Sancho